China L-valine CAS 72-18-4 Yekudya Giredhi (AJI USP) vagadziri uye vanotengesa | Honray
Chigadzirwa Chigadzirwa :: L-Valine
L-Valine (Yakapfupikiswa Val) ndeimwe ye18 yakajairika amino acids, uye imwe yeasere akakosha amino acids panyama yemunhu. Inodaidzwa kuti branched chain amino acids (BCAA) ine L-Leucine uye L-Isoleucine pamwechete nekuti ese ane methyl side ketani mune yavo mamorekuru mamiriro.
L-Valine ndeimwe aliphatic amino acids pakati pemakumi maviri emhando dzeproteinogenic amino acids uye branched-cheni amino acid (BCAA) iyo mhuka pachayo isingakwanise kuigadzira uye inofanirwa kutora kubva kune yekudya kuti iwane zvavanoda zvinovaka muviri; saka L-valine yakakosha amino acid. Mhedzisiro huru seinotevera:
(1) Yakawedzerwa kuzvikafu zvekudya zvinowedzera mukaka goho. Iyo michina ndeyekuti L-Valine inogona kukanganisa kugadzirwa kwe alanine uye kuburitswa kwemhasuru, uye iyo nyowani yakawana alanine mu lactations 'plasma kurudyi kubatsira chipfuva chemazamu kuchinjira kune chinodikanwa chemidziyo yeglucose uye nekudaro mukaka goho unokwira.
(2) Kuvandudza masimba ezvipfuwo emhuka. L-Valine inogona kukurudzira mapfupa emhuka T maseru kushanduka kuita maserura T maseru. Kushomeka kwevhavha kunoderedza kuwedzera C3 uye mwero we transferritin, zvichikanganisa zvakanyanya kukura kwetimmus uye peripheral lymphoid tishu uye zvichikonzera kukura kwekudzivirira kune acidic uye kwazvakarerekera machena masero eropa. Kana ichinge yashaikwa huni, nhiyo dzinofamba zvishoma nezvishoma uye nemhinduro shoma yehutachiona kurwisa hutachiona hwechirwere cheNewcastle.
(3) Inokanganisa mhuka endocrine mazinga. Zvidzidzo zvakaratidza kuti kudyara kunodyara uye kudya kwemakonzo kunwisa neL-valine kunogona kuwedzera kuwanda kweprolactin uye kukura kwehomoni mumaplasmas avo.
(4) L-valine zvakare yakakosha pazvinangwa zvekugadzirisa matishu uye kudzoreredza. Inodaidzwa kuti bazi-rakasungwa amino acid kana BCAA, iyo inoshanda pamwe chete nemamwe maBCAAs maviri anozivikanwa saL-Leucine uye L-Isoleucine.
Pashure: L-Tryptophan CAS 73-22-3 yeParma Giredhi (USP)
Zvadaro: L-Leucine CAS 61-90-5 YeChikafu Giredhi (AJI USP)
L-Threonine CAS 72-19-5 yeChikafu Giredhi (FCC / AJI / ...
L-Isoleucine CAS 73-32-5 Yekudya Giredhi (AJI USP ...
L-Lysine HCL CAS 657-27-2 yeChikafu Giredhi (FCC / AJ ...
L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm Giredhi, Kudya Kwemhuka, 73-32-5 L-Isoleucine, Pharm Giredhi L-Leucine, L-Threonine Chikafu cheGiredhi,